Accueil > Gazetin'ny nosy > Kaomandin’ny Zandaramariam-pirenena: Hanaiky ny baikon’ny vadin’ny sasany ve ?
Kaomandin’ny Zandaramariam-pirenena: Hanaiky ny baikon’ny vadin’ny sasany ve ?
Nisy didim-panjakana iray noraisin’ny filohampirenena teo anivon’ny fivorian’ny filankevitry ny minisitra omaly, izay nanaisotra tamin’ny toerany amin’ny maha-kaomandy ambonin’ny zandarmariam-pirenena ny Jeneraly Ramiandrisoa Jean de Dieu, ary nanendrena ny Jeneraly Andrianjanaka Njatoarisoa, hisolo toerana azy.
Izay izany vao vaky tanteraka ny fery teo anivon’ny filohampirenena ka nahatonga azy ho tapa-kevitra hanaisotra ny Jeneraly Ramiandrisoa Jean de Dieu amin’io andraikiny io. Efa herin-taona mahery mantsy izay no nahenoana fa tsy levon’ny “vadin’ny sasany” mihitsy ity manamboninahiatra jeneraly eo anivon’ny zandarmariam-pirenena ity satria tsy mety mano ny baikony sy manompo azy araka ny sitra-pony. Tsy baiko ara-panjakana aloha ilay izy ary tsy tompon’andraikitra ara-panjakana manana ny fahefam-panjakana tokony hibaiko ity kaomandy ambonin’ny zandary vao nesorina ity fa baiko avy amina olom-pirenena tsotra nialokaloka tao ambanin’ny anarana maha- “vadin’ny sasany” azy.
Raha ny akom-baovao dia tsy nahita ravina avaratra teo anivon’ny zandarmariam-pirenena mihitsy ny “vadin’ny sasany” nandritra ny naha-kaomandy ambonin’ny zandarmariam-pirenena ny Jeneraly Ramiandrisoa Jean de Dieu ka tena tsy faly taminy. Raha ny sitrapon’io “vadin’ny sasany” io dia efa tamin’ny taon-dasa toa izao no nisaorana izy saingy izao, hoy izahay, vao vaky ny fery.
Raha ny re aza dia efa nanam-pikasana hametra-pialana amin’ny maha-kaomandy ambonin’ny zandarmariam-pirenena azy mihitsy ny Jeneraly Ramiandrisoa Jean de Dieu, saingy tsy mbola nahita olona hasolo azy angamba ny “sasany” ka tsy nanaiky.
Ny isan’ny tena nampahalaza ny fifanolanaa teo anivon’ny fianakaviamben’ny zandary sy ny “vadin’ny sasany” moa dia ilay kolikoly avo lenta tao anatin’ilay fanadinana fifaninana handraisana ho mpianatra zandary tamin’ny taona 2016. Avo lenta tokoa ny vola notakian’ny “vadin’ny sasany” tany ambadika tany momba an’io fanadinana fifaninanana io ka raha zatra ny lalan-dririnina tamin’ny sehatra sasany ny “vadin’ny sasany” momba ny jadona nataony ka hoe tsy maintsy toavin’ny rafitra ny zandary, dia tsy nahita rariny mihitsy izy satria ny fianakaviamben’ny zandarmariam-pirenena tamin’ny ankapobeny mihitsy no nanda sy nitsipaka ilay teti-dromotra.
Tsy zakan’ny “vadin’ny sasany” mihitsy, noho izany, ity kaomandy ambonin’ny zandary ity, saingy ankehitriny moa izany dia nahita olona notendrena ho amin’izany andraikitra izany ny fitondram-panjakana ka “nisaorany” ny Jeneraly Ramiandrisoa.
Dia sanatria ve ka tsy mbola hanaiky indray ny vadin’ny sasany izao raha tsy manao tokim-panompoana azy ity kaomandy ambony vaovao mitantana ny zandarmariam-pirenena vao voatendry omaly ity ?